Olan’ny famatsiana :: Nitokona noho ny fahatapahan-drano ny mponin’Antsahameva • AoRaha
Olan’ny famatsiana Nitokona noho ny fahatapahan-drano ny mponin’Antsahameva
Tezitra. Nilanja sora-baventy, nandoro kodiarana fiara, nihorakoraka teny anaty arabe sy ny sisa. Vao maraina dia efa nidina an-dalambe ny mponina sasany teny amin’ny fokontany Antsahameva. Ny fahatapahan’ny rano teny an-toerana sy ireo fokontany manodidina tao anatin’ny andro maromaro no anton’ny fitokonana.
“Efa ho herinandro izao no tsy nisy rano intsony io paompin-drano io. Mividy rano izahay noho izany satria any amin’ny iray kilaometatra miala eto indray vao misy rano. Arivo hatramin’ny roa arivo ariary ny hividianana ny rano. Mikarama lafo, hono mantsy, ireo mpantsaka noho io halavirana io”, hoy i Landy, renim-pianakaviana iray monina eny Antsahameva.
Nambaran’ireo mponina fa nisy tamin’izy ireo no tsy maintsy naka rano tany an-tanimbary. “Efa fantatra fa mankarary saingy mividy fanafody natokana ho an’ny fanadiovana rano izahay . Io aloha no hany vahaolana”, hoy ny renim-pianakaviana iray hafa. Marihina fa efa nanao fitokonana ny mponina, teny Antsahameva, tamin’ny alakamisy lasa teo.
An-dalana ny vahaolana maharitra
“Takinay ny hamerenana ny rano ety aminay mba hahafahana maka rano amin’ny antoandro . Hihamafy ny fitakiana hataonay raha toa ka tsy misy mihitsy ny vahaolana. Efa hatramin’ny volana avrily izahay no efa amin’ny alina no maka rano fa tsy mandeha ny paompy amin’ny antoandro”, hoy ny fanampim-panazavan’i Landy.
Nambaran’ny orinasa Jirama tamin’ny fampitam-baovao nalefan’izy ireo kosa fa efa nidina ifotony teny an-toerana ny tompon’andraikitra avy amin’ny Jirama sy ny minisiteran’ny Angovo, ny rano ary ny akoran’afo taorian’ny fitokonan’ny mponina, omaly. “ Efa nisy ny fizaràna rano tamin’ny fiarabe ho famahana vonjimaika ny olana”, araka ny fanampim-panazavana.
Etsy andanin’izay , mampahatsiahy ny vahaolana hanalefahana ny olan’ny tsy fahazoan-drano ny Jirama, toy ny fanorenana toby famokaran-drano eny Amoronakona. Heverina hamokatra rano 10m3 isan’ora izany ary afaka volana vitsivitsy no ho vita ny asa.
Rugby – Vehivavy Afrikanina :: Nomontsanin’ny Lionan’i Kenya ny Makis
Fiainana mpanao hatsikana :: Miresaka ny andavanandrony ivelan’ny fampihomehezana i Antso Bommartin